Mar Kale Masuuliyiineey Tacsida iyo Tol-la’aydiina Maanta Hiil Berri Noogu Badala! – Radio Daljir
Mar Kale Masuuliyiineey Tacsida iyo Tol-la’aydiina Maanta Hiil Berri Noogu Badala!
Oktoobar 29, 2017 4:37 g 1
Qormada hoose waxaan qornay 15kii Oktoobar, qaraxii Isgoyska Soobe kabacdi ee 14kii Aktoobar. Shalay waxay aheyd 28kii Oktoobar, waana laba asbuuc kabacdi, Sabti-ku-Sabti iyo qarax kale oo lagu waayey masuuliyiin sarsare, kuwo xilal haya, kuwo soo qabtay, xildhibaano, ajnabi, iyo muwaadiniin oo Soomaaliyeed oo dhammaantood bilaa danbi ah.
Kaaga daran e qaraxu waxa uu ka dhacay aagga ugu nabdoon Xamar, ugu ciidan iyo baaritaan badan; waxa uu ka dhacay hoteel deegaan u ah, ayna ku caweeyaan masuuliyiin dowlo, kuwo ajnabi, iyo waliba ganacsato.
Laakiin laba sbuuc kabacdi, Sabti-ku-Sabti, hadana waa sidii oo kale iyo tacsi kale. Illaa iyo hadda ma jirto siyaasad cusub iyo habarwacasho horleh, aan ka aheyn xoogaa Shimbirta (Twitter) iyo Wajibuug (Facebook) lagu soo dhajiyo oo lagu oranayo, “Soomaaliya waa kula jirnaa” iyo waxyaalo kale oo la mid ah, macno badan aan laheyn, oo aan berri iyo saadanbe toona farqi u sameyn doonin Soomaali iyo Soomaaliya. Waana intii uu CM Sanbalooshe, Agaasimaha Nabadsugidda DFS uu ku soo qoray wargeyska New York Times, asaga oo yiri, “Soomaaliya oohin waxba tari mayso ee nagu caawiya in aan argagixisada la dagaalano.” Hadde ogoow waa inta ugu roon oo masuul dowlo soo qoray, waana tix laga yaabo in uu shaqadiisa ku waayo. Xaggee wax iska qabsan la’yihiin?
Ogoow talooyinka Sanbalooshe waxa ay ahaayeen lama helaan, laakiin aaway tii dowladdu? Maxaa shalay isbadalay? Maxaa berri isbadali doona? Maxaa DFS uga qorshe ah qaraxyada soo socda, berri, asbuuc kabacdi, laba asbuuc kabacdi? Miyaynaan wax ka baran waxa maalin kasta dhacaya? Miyaynaan ugu yaraan hal talo, labo talo, ama ugu badnaan saddex talo inta masuuliyiinta DFS miiska soo saaraan aysan har iyo habeen isku dayin karin in ay taladaas ka miradhaliyaan oo ka guulgaaraan?
War nasiibdarrada Xamar haystaa tirabadanaa! War tan DFS haystaa daranaa! War tan ragga maamulada Soomaaliya madaxda u ah oo maanta Xamar jooga, tan fiirsanaya, tooda berrina moog ka sii nasiibdaranaa!
Fadlan mar kale akhri qoraalka hoose, oo qaraxa berri ama saadanbe u tooghay.
Daw Abs 3 years ago
Xamar waa fashilantahay. Nadabsugiddeeda iyo booliskeeda waxaa ka buuxa ciidamo u adeega cadawga dadka. Waxaan uga digayaa dawlad goboleedyada inaysan ciodankooda iska keenin Xamar.